အိမ်ငှားခ ပေးရမှာ…မပေးနိုင်လို့ပါ သားရယ် – Shwe Thadin
အိမ်ငှားခ ပေးရမှာ…မပေးနိုင်လို့ပါ သားရယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သားရယ်…အိမ်ခလေး ပေးနိုင်ပြီ။ ကားရေဆေးခုံမှာ…ရေဆေးဖို့ ကားတင်ပြီ…ဆင်းလာတော့ အဘတယောက် ဆိုင်အဝကနေ အထဲကို ချောင်းကြည့်နေရှာ တယ်။ အဘ…လာပါအုံး…ဘာတွေ ရောင်းတာတုန်း…ငုံးဥပါ သားရယ် (၂)ထုပ် 500 Ks ပါ။ ဟုတ် အဘ…မျက်နှာလဲ မကောင်းဘူး…ဘာဖြစ်လို့လဲ …ညနေကျ ဒီနေ့အတွက်…အိမ်ငှားခ ပေးရမှာ…မပေးနိုင်လို့ပါ သားရယ် (တနေ့ ၃ထောင်ပေး ရတယ်တဲ့)
အော်…ဟုတ် အဘ…အသက်ကကော ဘယ်လောက် ရှိပြီလဲ…အဘ (၆၈)နှစ် ကျော်ပါပြီ သားရယ်…ဒါလေးတွေ ရောင်းကုန်မှ ပေးနိုင်မှာ…ဟာ…ဒါဆို ရောင်းကုန်ပြီသာ မှတ်ဗျာ သားရယ်…သားစားနိုင်သလောက် လိုသလောက်ပဲ ဝယ်ပါ … အဘ ပီရင် သာကေတ ကျောက်တိုင်ဘက် သွားရောင်းမလို့…အဲ့မှာလဲ ရောင်းရမှာပါ။ အဘက ဘာနဲ့ သွားမှာလဲ အဲ့ကို? လမ်းလျှောက်ပြီ သွားမယ်သားလေး
ဟာ.. အဝေးကြီး ..အဘကလဲ နေ့လည် နေကပူနဲ့ မသွားနဲ့ (စက်ဆန်း pro 1 နားကနေ သာကေတ ကျောက်တိုင်ကို လမ်းလျှောက်မှာတဲ့) ဘယ်နှထုပ်ရှိလဲ အဘ…တူတူ တွက်ကြရအောင်…(အားလုံး 9,000 Ks ဖိုး ရှိတယ် ) ရော့…အဘ 20,000 Ks ယူလိုက်နော်…(ကျနော်လဲ ကားရေဆေးဖို့လာတော့ ၂သောင်းပဲ လက်ထဲ ထည့်လာမိတယ်။
ဖုန်းနံပါတ်တော့ ပေးထားတယ်။ ဆက်သွယ်ခိုင်း ထားတယ်) ဟာ…ဝမ်းသာလိုက်တာ…အိမ်ခလေး အဘ ပေးနိုင်ပြီပေါ့…ဒီနေ့ စိတ်အေး လက်အေး ပြန်နိုင်ပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သားလေးရယ်…အရမ်းပျော်တာပဲ…ဒါဆို ခု ပြန်တော့နော်…ဂရုစိုက်ပြန်နော်…ကျေးဇူးပါ သားရယ်…အဘ အိမ်ပြန် တော့မယ်။
အိမ်ရှင် တွေကို အဘ ပေးနိုင်ပြီ။ အော်…ကျနော် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ရင် စားသောက်တဲ့ ကုန်ကျငွေလေးက…ဆင်းရဲနွမ်းပါး အဖိုးအဖွားများအတွက် အတော်ခက်ခဲ ရှာဖွေရပါလား ဆင်းရဲနွမ်းပါး အဖိုးအဖွားများအတွက် အတူအကွ ပူးပေါင်း ကူညီလှူဒါန်းလိုပါက ကိုပူတူး နှင့်ဘော်ဒါများ ဖုန်း 09-5408437 သို့ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်…
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ သားရယ္…အိမ္ခေလး ေပးႏိုင္ၿပီ။ ကားေရေဆးခုံမွာ…ေရေဆးဖို႔ ကားတင္ၿပီ…ဆင္းလာေတာ့ အဘတေယာက္ ဆိုင္အဝကေန အထဲကို ေခ်ာင္းၾကည့္ေနရွာ တယ္။ အဘ…လာပါအုံး…ဘာေတြ ေရာင္းတာတုန္း…ငုံးဥပါ သားရယ္ (၂)ထုပ္ 500 Ks ပါ။ ဟုတ္ အဘ…မ်က္ႏွာလဲ မေကာင္းဘူး…ဘာဖစ္လို႔လဲ …ညေနက် ဒီေန႔အတြက္…အိမ္ငွားခ ေပးရမွာ…မေပးႏိုင္လို႔ပါ သားရယ္ (တေန႔ ၃ေထာင္ေပး ရတယ္တဲ့)
ေအာ္…ဟုတ္ အဘ…အသက္ကေကာ ဘယ္ေလာက္ ရွိၿပီလဲ…အဘ (၆၈)ႏွစ္ ေက်ာ္ပါၿပီ သားရယ္…ဒါေလးေတြ ေရာင္းကုန္မွ ေပးႏိုင္မွာ…ဟာ…ဒါဆို ေရာင္းကုန္ၿပီသာ မွတ္ဗ်ာ သားရယ္…သားစားႏိုင္သေလာက္ လိုသေလာက္ပဲ ဝယ္ပါ … အဘ ပီရင္ သာေကတ ေက်ာက္တိုင္ဘက္ သြားေရာင္းမလို႔…အဲ့မွာလဲ ေရာင္းရမွာပါ။ အဘက ဘာနဲ႔ သြားမွာလဲ အဲ့ကို? လမ္းေလွ်ာက္ၿပီ သြားမယ္သားေလး
ဟာ.. အေဝးႀကီး ..အဘကလဲ ေန႔လည္ ေနကပူနဲ႔ မသြားနဲ႔ (စက္ဆန္း pro 1 နားကေန သာေကတ ေက်ာက္တိုင္ကို လမ္းေလွ်ာက္မွာတဲ့) ဘယ္ႏွထုပ္ရွိလဲ အဘ…တူတူ တြက္ၾကရေအာင္…(အားလုံး 9,000 Ks ဖိုး ရွိတယ္ ) ေရာ့…အဘ 20,000 Ks ယူလိုက္ေနာ္…(က်ေနာ္လဲ ကားေရေဆးဖို႔လာေတာ့ ၂ေသာင္းပဲ လက္ထဲ ထည့္လာမိတယ္။
ဖုန္းနံပါတ္ေတာ့ ေပးထားတယ္။ ဆက္သြယ္ခိုင္း ထားတယ္) ဟာ…ဝမ္းသာလိုက္တာ…အိမ္ခေလး အဘ ေပးႏိုင္ၿပီေပါ့…ဒီေန႔ စိတ္ေအး လက္ေအး ျပန္ႏိုင္ၿပီ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ သားေလးရယ္…အရမ္းေပ်ာ္တာပဲ…ဒါဆို ခု ျပန္ေတာ့ေနာ္…ဂ႐ုစိုက္ျပန္ေနာ္…ေက်းဇူးပါ သားရယ္…အဘ အိမ္ျပန္ေတာ့မယ္။
အိမ္ရွင္ ေတြကို အဘ ေပးႏိုင္ၿပီ။ ေအာ္…က်ေနာ္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ထိုင္ရင္ စားေသာက္တဲ့ ကုန္က်ေငြေလးက…ဆင္းရဲႏြမ္းပါး အဖိုးအဖြားမ်ားအတြက္ အေတာ္ခက္ခဲ ရွာေဖြရပါလား ဆင္းရဲႏြမ္းပါး အဖိုးအဖြားမ်ားအတြက္ အတူအကြ ပူးေပါင္း ကူညီလႉဒါန္းလိုပါက ကိုပူတူး ႏွင့္ေဘာ္ဒါမ်ား ဖုန္း 09-5408437 သို႔ဆက္သြယ္လႉဒါန္းႏိုင္ပါတယ္ရွင့္…
အဖိုးက (၇၃)နှစ်၊ အဖိုးအမက (၈၅)နှစ် မောင်နှမ(၂)ယောက် နေတာတဲ့…မမကြီးက နေမကောင်းဘူးတဲ့
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ…ဒီနေ့ လျှောက်ပြီ မပတ်ရတော့ဘူး…သားရယ်